Qubanaha » Askari kenyaan ah oo Al-shabaab ay hestaan oo fariin u diray Dalkiisa.
Askari kenyaan ah oo Al-shabaab ay hestaan oo fariin u diray Dalkiisa.
Al-Shabaab ayaa mar kale baahiyay muuqaal Video uu ka soo muuqday mid ka mid ah labadii askari Kenyanka ahaa ee horay u soo bandhigeen, kuwaasoo ka mid ahaa askar ay ku qabsadeen dagaalkii sanadkii la soo dhaafay ka dhacay Ceel Cadde.
Muuqaalka Video oo soconaya 7 daqiiqo ayaa waxaa ka soo muuqday David Ngugi oo ka tirsanaa guutada 120aad ee madaafiicda Ciidamada Milateriga Kenya, waxaa uu sheegay inuu ka soo jeedo Gobolka Kiyambu ee dalka Kenya.
Askarigan oo labisnaa dareyska lagu yaqaano Ciidamada Milateriga Kenya ayaa si gaar ah Madaxweyne Uhuru Kenyatta uga dalbaday inuu hubaal ka dhigo sidii loo sii deyn lahaa, isaga iyo askarta kale ee la xiran.
Sidoo kale waxaa uu ugu baaqay dadka reer Kenya inay dowladdooda ku cadaadiyaan sidii askarta maxbuuska u ah Al-Shabaab loo sii deyn lahaa.
Waxaa uu sheegay inay ka yaabisay in aanu wali wax hadal ah ka maqal dowladda Kenya tan iyo weerarkii Ceel Cadde oo haatan laga joogo 15 bilood, isagoo is weydiisay su’aal ah cida keentay Soomaaliya oo ah dowladda Kenya.
Askarigan ayaa sheegay in dowladda Kenya ay iska ilowday, waxaana mar kale shacabka Kenya uu ugu baaqay inay dadaal u galaan sidii loo sii deyn lahaa.
Al-Shabaab ayaa bishii Janaayo ee sanadkii hore weerar culus ku qaaday deegaanka Ceel Cadde, halkaasoo ay ku dileen boqolaal ka tirsan Ciidamada Kenya.
Ugu dambeyn muuqaalka ayaa farriin loogu diray dowladda Kenya, waxaana lagu yiri “Masiirka maxaabiistan waxay ku jirtaa gacmihiina, ku guuldareysashada in aad si dhaqso ah wax ku qabataana, waxay keeni doonta geeridooda”